Jubbaland oo ka hadashay Imaanshaha Ciidamada Itoobiya ee Kismaayo – Radio Daljir
Janaayo 4, 2016 11:12 b 0
Isniin, Janaayo 04, 2016 (Daljir) —Ciidamada Ethiopia ee qaybta ah howlgalada AMISOM ee dhawaan yimi Kismaayo ayaa shalay munaasbad lagu soo dhaweynayey lagu qabtay Kismaayo,waxaa ka qayb galay madaxweynaha ku xigeenka kowaad ee Jubbalabd Gen.Cabdullaahi Shiikh Ismaaciil iyo Masuuliyiin kale.
Waxaa munaasabada looga hadlay ciidamada ay sababta ay u yimaadeen Jubbaland,masuuliyiinta ayaana isku wada raacay in ciidamada Ethiopian ka ah Jubbaland u yimaadeen ka qayb galka howlka lagula dagaalamayoAlshaabaab waa siday shegeen.
Madaxweyne ku xigeenka Kowaad ee Jubbaland Cabdullaahi Shiikh ayaa sheegay in ciidamadu Jubbaland ka caaawin doonaan dhanka nabad galyada islmarkaana ay Jubbaland ku taageeri doonan sidii gacanta lagu soo celin lahaa deegaanada ka maqan.
“Ciidamadan waxay ku yimaadeen rabitaanka shacabka Jubbooyinka, waa ciidamadii qabtay Baardheere, waxayna ka qeyb qaadan doonaan howl galada lagu xoreynayo deegaanada Jubbooyinka”ayuu yiri C/llaahi Sheekh Ismaac.
Ciidamada Ethiopian ka ah ayaa badalay ciidamda Siiri liyoon oo dhawaan ka baxay Soomaaliya kuwaas la sheegay inay Soomaaliya uga tageen sababo dhanka caafimaadka ka dib markii dalkooda laga helay cudurka ebola sanadkii lasoo dhaafay.